Iiprojekti zokurhweba ze-guerrilla zikarhulumente zenza iicandelo
Tsibela ngqo kumxholo
intengiso ye-guerilla ephucukileyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo enkulu eyenziwe li-caveman yamanye amazwe
sikrelekrele, sinobugocigoci, kwaye sibukhali nangakumbi kunayo yonke i-agencys ngaphambili. senza unxibelelwano olungalibalekiyo nomthengi wakho.
Uxanduva lwequmrhu lwe CSR
Bonisa imenu esezantsi
Wamkelekile kwi-Arhente yaMazwe ngaMazwe yaseCaveman!
Imifanekiso eqingqiweyo emikhulu kunye nomgaqo wokuthengisa wabanqolobi kwi-MyToys
Wamkelekile kwi Iarhente yeCaveman International, sijonga emva abathengi abaziwayo bathanda Spotify, Wikipedia kunye neMyToys kwindawo Ukuthengiswa kweGerilla. Uxanduva lokudibana ibalulekile kuthi, yiyo loo nto sixhasa abathengi bethu Imibutho yamalungelo oluntu kunye noncedo lophuhliso.
Intengiso yasebusika yabanqolobi kwi-ODLO ngeDetlef D! eMunich
U-capital Bra wayekhangela e-arhente egcwala kakhulu yokufihla iJamani ephantsi komhlaba ukuze iphinde iqale kwakhona i-albhamu yayo. Iifleshi ezihambahamba eBerlin, ukukhanya okuqikelelwa kwiimoto ezihambayo kunye nokunyuka okuninzi. Iindidi zeendaba ezahlukeneyo zinike ingxelo ngemizamo yethu.
Ukuqikelelwa kwevidiyo ngexesha lomdlalo weTV ophilayo kwi-BritAward eLondon kwi-NGO
Intengiso eluhlaza. I-Caveman yamanye amazwe iyeyona arhente yokuqala yentengiso yokubonelela ngokuzoba igrafiti kunye nophawu lwasesitalatweni ngamagcisa aseJamani ukusukela ngo2006. Iimpawu ze-moss, amabhanti e-moss, imifanekiso eqingqiweyo ye-moss, imiqondiso ye-moss, yonke into inokwenzeka! I-Moss inokucutshungulwa ngokufanelekileyo kwaye ngononophelo oluncinci ihlala iluhlaza kakhulu kumgangatho wakho.
Sihambele isaphulelo esityheli ngomphembeleli owaziwayo. Ukhetho olungaphaya.
Iprojekthi yeBadenova AG Agasti 2019: Utshintsho lwemozulu lusixhalabisa sonke!
Ukuthengiswa kweGuerrilla -ubugcisa bokufumana ukufikelela okuphezulu kunye nelona nqanaba liphezulu lokuqwalaselwa kwabathengi ngotyalo-mali oluncinci.
Nge-SnowOnDemand yethuba ekhethekileyo, ugxininiso kwintengiso yakho. Ikhephu elingelonyibilikisi elinyibilikileyo lilungile ekutsaleni umdla.
Singavuya ukukucebisa ngokwakho malunga nentengiso yentsholongwane kunye nenye indlela yentengiso yabanqolobi. Tsalela umnxeba i-arhente yentengiso yokuthengisa ngokuthe ngqo!
Intengiso ngeMvulo-Sat 10 ekuseni-20 pm: +49 2131 4058-629
24H Ihotele: + 49 163 71 666 23
SPOTIFY I-drone yomsindo
pixel Mncedi Ukuchazwa kwevidiyo kwi-Afrika
Ngamaxesha onke currywurst. Soloko ubhukisha intengiso yeeposta. Soloko ubona okufanayo ...
Thina eCaveman sinombono njengarhente yokuthengisa i-guerrilla.
Cinga ngesidumbu, malunga nomnye umlingo, ubuyele kwimveliso yakho, kwaye uhlale ubeka ubomi bethu obunobungozi emngciphekweni.
Nceda ulande iphothifoliyo yethu yesikhundla ukuze ufumane umboniso omfutshane wezinto esizinikelayo. Nceda nqakraza apha
Ukuthengiswa kweCaveman Guerrilla ngenye yee-arhente ezikhethekileyo kwi-arhente. Sivame ukusebenza
i-incognito yama-arhente amakhulu enethiwekhi kwintsimi yegerrilla kunye nokuthengiswa kwe-trojan, nathi sinokuthatha umkhankaso wezopolitiko
Iindlela zentengiso ye-guerrilla
UJay C. Levinson wadala imigaqo yokuthengiswa kwamagorha kwiminyaka ye-80. I-Caveman International, nayo, izinikezele kule migaqo ebalulekileyo kwaye ke inikeza iiprojekthi ezipapasho ezikhangayo kuzo zonke iingcinga zomthengi wakho.
I-Guerilla Marketing ijolise ingqalelo yengqondo yakho. Inkqubo ye-Classic ye-intengiso yoshishino njenge-TKP, i-CPC kufuneka inganyanzelwanga ngenjongo yokufezekisa ubundlobongela.
Ukuthengiswa kwe-Guerrilla kukuvumela ukuba uhlasele ngqo ukhuphiswano lwakho. Akukho mphuphiswano oqinisekileyo kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokuthengiswa kwamagurrila.
Ubuncwane bomntu buhlobisa iiprojekthi ze-arhente yethu.
FÜHR isibambiso ZORHWEBO
Esikhundleni sokuphuma kwibharityhulam yentengiso, iiprogram kufuneka zifike ngokufanelekileyo kwiqela elijoliswe kuyo ukuze igalelo lakho lokukhangisa liza kudlulelwa kubahlobo abaninzi kunye nabaziwayo ngokusemandleni.
Ukuthengiswa kweGerilla kudala indawo yokujongana nabaphulaphuli bakho abajolise ngqo apho ukhona. Ingaba kukho echibini langaphandle, kwikontoni okanye ukhetho.
I-Guerrilla yokuThengisa imvakalelo ibangela abantu kwaye idala ingqalelo kwi-label yakho yegama.
Siqokelela izenzo zethu kuwe kumaphulo anamandla.
Zonke iiarhente kunye nabathengi bokugqibela bajongiwe banonxibelelwano lwe-24/7 neCaveman International ukuze basabele ngokukhawuleza kwimicimbi yangoku. Nokuba yintengiso ye-Twitter yesuperbowl; okanye ukubhukisha imidiya kwiminyhadala ebalulekileyo yeTV. Iarhente yethu iyayikhathalela intengiso yakho kwaye isebenza rhoqo neearhente zenethiwekhi ezaziwayo kwihlabathi liphela. Ipotifoliyo yethu ibonelela:
∴ Ukuphuhliswa kwezimvo zentsholongwane kunye namaphulo
Ukuthengiswa kweMicimbi yezoLuntu kwiYurophu
Ukusebenzisa i-analog digital big screen bombers
Ukuthengisa okuKhanyayo kunye noBugcisa bokuKhanya
Imephu ye-3D ezindlwini nakwizinto ezihambayo
Ukunyusa kunye nakwiindawo ezingaqhelekanga
❖ Ibhola ibhola yekhamera ihamba
Vert Ukugcina imvula kunye noxinzelelo lomsuki ojikeleze i-Graffiti
Advertising Intengiso yeLaser kunye nelaser rainbow
స Flyvertising kunye nezinye izinto ezindizayo ezinqabileyo kwiibhanki ezingaphezu kwamaqela abantu
Isitifiketi somgangatho we-floor, idijithali ngumculi wezinto ze-3D phantsi
Ubugcisa bezitalato zeAsta kwizakhono zabadlali bezemidlalo
I-Chalk Graffiti okanye i-Floor Stencil Stencil
Isitifiketi se-∴ Foil kunye ne-foil edibanisa kuzo zonke iindawo ezifana nezindonga zendlu
I-Streetbranding i-Streetbranding kuquka ukuphuhliswa kwe-arhente yethu yokuthengisa
Verse Ukuguqula igrafiti kunye nophawu lwesitalato
❖ Iiprogram zengqondo zentlalo
∴ Ngokusebenzisa izivumelwano kunye neWall AG kunye neStroeer Service yokuthengisa ngaphandle kunye neepowusta
Ukuthengiswa kweYunivesithi ye-University kunye nenkonzo yeqela kunye nenkonzo yeflaya
Ukuthengiswa kwe-Guerilla kuyo yonke indawo yokuphuhliswa kwemveliso
❖ Ngaphantsi kwe-campaign-marketing campaigns
Amaqela e-foam e-foam kunye namaqela ekhephu kwimicimbi kunye neekonsathi
Amahlokondiba kunye neekonsathi zoluntu ezifihlakeleyo
I-3D yokukhanyisa ukukhanya kwemephu ye-Saarbrücken
Ixesha elide kakhulu lokuthumela iposta kwihlabathi
International Caveman enye inkonzo epheleleyo arhente specialist ngezantsi--line ikuzobanjalo umlenze wesibili phezu phulo lwezopolitiko ngokukodwa. kwekhono core kukukhulelwa kunye nokuphunyezwa Ukuthengiswa kweGerilla kwaye UkuThengiswa koMhlaba Amanyathelo, ukuKhuthazwa, iIzenzakalo, iziKhuthazo kunye neeSamplings.
Art ukukhanya kunye nemvelaphi yazo iziganeko kunye nokufakela ukukhanya okubandakanyekileyo ngenye yeenjongo zethu ezinkulu.
Kwindawo ikhankasela Njengearhente yokuthengisa yabanqolobi siphula umhlaba omtsha. Umzekelo wokhetho: Ukusondela kokhetho, kokukhona ezibalulekileyo zizenzo ezimangalisayokuphulo lonyulo umvoti ophakamileyo ukufikelela kunye Ukuphumelela iinjongo zakho, Ukunxibelelana kwangaphambili kubonisa kwaye isicelo esingenasisiseko sasiye safumana isilumko izicwangciso zobungqingili ezicingayo kunye nokumangalisa zikarhulumente zobugcisa - kunye nobuchule bethu obuphambili njengoko IArhente yokuThengisa iArhente ekhethekileyo
I-Agerrilla yoThengiso lweNtengiso
Abantu abangaqhelekanga ukubonelela ngeembono ezingavamile. Abantu abahlukeneyo benzisa oko lonkeukuba ukuthengisa kuyakunika. Into ebonakalayo eluhlaza, enye ide kwenye. Yintoni enye looker kukuba, yenze enye i-yawn. Omnye uthi i-chaos, enye isalisa. Izihloko zeentengiso ze-40 qi ni sekise ukuba iliso lesilwanyana libhekiswe kubantu.
Ayiqhwala kodwa aqokelele iingcamango ezinzima xubusha ngezicombululo qiniseka ukuba izenzo zethu ziyiyo ngeso kwaye amaphupho ukubhena abaphulaphuli. Injongo yethu yile yokuvelela, Injongo yethu kukuqinisekisa ukuba wonke umntu obone umsebenzi wethu ufuna ukwabelana ngawo. Sigxininisa iingcamango zethu kwixesha elide kunokwenzeka izisekelokude kube engabonakaliyo kodwa eyayicace iza kukhanya.
Ekubeni Eyasungulwa ngonyaka we-2000 be balwa ochwepheshe le i-agerrilla yomhlaba wonke Umkhobi onamaziko amaninzi anamhlanje amaxesha kunye neeprojekthi ezingavamile - abathengi abaziwayo kude phambili eNetherlands, eMorocco naseJamani.
Imidlalo yokuthengisa embi
Iidronsi zentengiso zeLenor, Procter kunye neGamblet
Ukuboniswa kokukhanya Ubusuku obomvu bemivalo
IFA yokusasazwa kweGerrilla
© 2020	intengiso ye-guerilla ephucukileyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo enkulu eyenziwe li-caveman yamanye amazwe